Chido chekuita zvepabonde zvakajairika muchibvumirano
Pasina zvepabonde, hukama hwakareba
Tsvaga kuti chii chinofadza ivo vaviri pamwe chete
Anodiwa rudo rusina kukwana
Zvave zviri kutengeswa kwemakore kwemakore ekuzadzisa kwepabonde ndiko kuisa vakaroorana pasi pedambudziko guru. Yenguva yekubvisa kukanganiswa uku kwechiito chepabonde chepabonde kuburikidza nefirimu, redhiyo neTV.
Chido chekurara pabonde
Kuzviisa, neshamhu, pauranda: Floral Sex sokuti zvinenge yakatotsakatika kubvira yose kubudirira "mashanu noruvara Gray".
Fancy chiito chepabonde
Ari filmed Hollywood shanduro, wokutanga vainyara uye ruzivo Anastasia yacho zvakafanana utsinye akanaka billionaire Christian Gray, uyo otaura Anastasia kuti nyika sadomasochistic-siyana.
Iyo hurukuro yakaoma yakave yakashandurwa manheru manheru uye yava yechiratidzo cheupenyu hunozadzisa hwepabonde kubvira pakatanga kuiswa mumatare akawanda emisika.
Sezvo rinogona zvinokambaira pamusoro imwe queasy kunzwa chimwe kare: panyaya nokukwanisa aenzanisire richigutsa pabonde upenyu, mumwe anofanira zvikuru kuzivisa tsika dzepabonde vakatowana vakaedza - kana kanenge sezvo mbiri singi kupinda machira, sei kuita firimu uye gamba nguva dzose kuramba.
Zuva, mukati-pose-pose paunotarisa, iwe unofungidzira uchigutsikana nevanhu, miviri yakaoma uye unopedzesa hutano hwakakwana. Chokwadi, chokwadi ndechokuti zvakasiyana: kuwedzera yokufaranuka kushushikana, basa uye musha kazhinji akasiya shoma nguva kana kunyange vanoda kunakirwa kuipa, rakakura pabonde. Uyezve, Vorturnen ane simba iwe unowanikwa paTV nguva dzose, kazhinji inopera nguva pfupi.
Panzvimbo pevarume vanoita zvepabonde pamwe chete vanodedera pamberi pe telly. Ichokwadi kuti vakawanda vanobvunza kuti: ukama hwedu kana hupenyu hwedu hwepabonde hwakashata here? Munhu anotsamwisa mumwe wako here zvepabonde zvakare?
Vanotsvakurudza nezvepabonde kuHamburg vakawana mune chidzidzo chokuti izvi zvakazara zvachose uye hazvina chokuita nehutano hwehutano hwomudzimai. Kana hukama huripo huripo, hukama hwepedyo hwepedyo huri pamwe chete.
Vatsva vanofarira, pasinei nezera ravo, vane mavhareji emunharaunda ye10 dzimwe nguva pamwedzi pabonde. Vanhu vari muhukama hwepanguva yakawanda vanozviita panguva imwe chete pavhareji "chete" pane nguva 4. Zvinoshamisa kuti zviri pachena hazvina basa kana ukama huri kare 5 kana makore 25. Izvi zvinonyanya kuitika nekuda kwekuti hutano hwepabonde hunochinja huri muhukama hwehukama.
Kutsvakurudza maitiro kunobvumirana kuti, kunyanya muzvikamu zvekutanga zvehukama, zvepabonde zvinoshandiswa sechinhu chinopesana nekugadzirisa vanhu pamwechete. Kana hukama huripo huripo huripo, kana hutano huchienda mberi - zvimwe zvinhu zvinotarisa. Kazhinji, saka, mubvunzo unomuka kana izvozvo zvaizove zvakanaka.
Zvechokwadi, zvinofanira kunge zvakajeka kuti hazvina kumbove "izvo" zvakadaro. Asi ichokwadi kuti hupenyu hwepabonde hunochinja muhukama hwehukama. Mubvunzo wekuti mumwe munhu anofanira kuedza nzvimbo itsva inenge isina kuwanikwa.
Kuita zvepabonde kunofadza kune vose
Kazhinji kacho nyaya yacho inotarisana nepamusoro inogona kuita erectile kusagadzikana uye kuvharwa kwemadzimai uye nzira yekugadzirisa nayo. Lucky vanhu avo vane chiremba wemhuri kune avo vane chivimbo chakazara.
Nheyo huru ndeyekuziva kuti hutano hweumwe neumwe mumwe wako hwakasiyana nehwo hwakanga huripo pakutanga kwehukama. Zvichiitika, izvi zvinobatsirawo, nokuti nyanzvi dzinotaura kuti zvepabonde mune hukama hwakareba, iyo inoshevedza "zvepabonde mumwe nomumwe" nenzira, inoita zvepabonde zvepabonde.
Vaya vanobatsirana vanoshanda pamwe chete kuti vawane kuti ndeve rudzi rwebonde ravanoda kuzadzisa uye zviroto uye zvishuvo zvavanoda kuedza pamwe chete. Sex varapi vanyevere pamusoro kuzvitutumadza raisanganisira munguva dzakadaro dzenzvimbo zvakawandisa kubva kunze - rirege kuva mienzaniso yakadai wo "mashanu noruvara Gray" kana zvinonyadzisira kubvunzwa.
Izvi zviri nyore zvakataurwa kudarika kuita, hongu, nokuti zvepabonde zvinokonzera patter zuva nezuva kune munhu wese. Izvo chaizvoizvo kukura kwezuva nezuva kwehutano hunokonzera hunoita kuti vanhu vave pasi pemanzwiro uye mupfungwa mupfungwa. Mumwe anogona kungorasikirwa nekuenzanisa kwekusingaperi pakati pezvako uye zvinonzi vanoda zvikuru kubva kune vhidhiyo. Uye zvepabonde zvinofanira kunge zvichinyara here? Sezvisingaiti.
Zvepabonde zvinonakidza zvinoshanda kune vakaroorana vanonzwa vakanaka pamwe chete. Ava vakaroorana vanowanzowana huro hwavo. Chinhu chakakosha ndechokuti iwe utaurirane uye taura nokutendeseka zvinopinda mumusoro wako. Zviri pachena kuti izvi hazvisi nyore nguva dzose kune munhu wose.
Zvine upenzi, hapana mutauro wakakwana webonde rekuita zvepabonde mumutauro wedu, sezvo pasina tsika yakarimwa munzvimbo ino. Zvinofanira kunge zvakajeka kuti zvepabonde rakanaka haigoni kuwira kubva kudenga. Kuita zvekutenda hakugoni uye hakuiti nguva dzose kuputika semhepo inoputika, kunyange kana iri nguva dzose inoratidzwa mumafirimu. Kurara kwakanaka kunoda kuti iwe uite chimwe chinhu.
Kune nzira dzakasiyana-siyana uye nzira dzekuumba upenyu hwepabonde kuitira kuti iwe ugone kugutsikana nazvo. Hazvisi nyore nguva dzose, asi pane nguva dzose nzira.
Zvepabonde panguva: Kumirira kuti iwe uwedzere kukundwa uye uchideredzwa nekuchiva kwakakanganwirwa rudo. Vanhu vemazuva ano vanoronga uye vanoronga zuva ravo rose-saka sei vasingaiti zvepabonde? Zvechokwadi, izvi zvinoratidzika kunge zvisingaiti, asi ichokwadi kuti zvepabonde zvisina kukwana zviri nani zvikuru pane kusangana pabonde zvachose.
Nhengo dzehurukuro: Kuumba urongwa hwekunyengera kana uchitaura pamusoro pepabonde kunogona kuva chikonzero chekufadza kwako. Sezvo iwe usina chikafu chakafanana chekudya kwemasikati zuva rimwe nerimwe, zvepabonde zviri mumubhedha bedzi, munguva yakareba zvinotyisa uye zvinoputika. Kuwana nzvimbo itsva, nzvimbo dzakanaka kunogona kunge iri mufaro mukuru.
Kutora nguva kunobatsira: Nepo zvakaitika mumafirimu chete mumaminitsi mashoma kusvikira counterparty kunaya mukuzadzika hwakakwana havo kupinda pamakusheni, handicho chokwadi zvakasiyana - uye kuti chinhu chakanaka. Izvo zvinonzi "zvepabonde zvishoma" zvinoitwa nekufamba kwenguva pfupi, asi zvakanyanya kunyanya. Uhu hwehutano huri kuwedzera nokukurumidza.
Kuva wakasununguka pane chimwe chinhu chitsva: Kufuridzirwa kunobva mumabhuku uye mafirimu hakurevi kuti kuve kwakaipa. Zvakakosha kuita chinhu chakanaka kubva mazviri. Hazvifanirwi kuva mashawi, zviputi uye mazhenje anopisa. Semuenzaniso, unogona kutanga nekungobatanidza meso ako. Izvo zvinoenderana nemhando dzose dzepabonde chete kuti vose vatori vechikamu vanonzwa vakasununguka. Saka kuti zvepabonde zvakanaka, zvakakosha kuti kunyange kana kwete inogamuchirwa.